Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Chris Wilder Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere na Ya
Akụkọ ndụ anyị nke Chris Wilder na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke Football Manager na aha otutu "The Old School Boss".
LifeBogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Chris Wilder's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Chris Wilder.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye njikwa nwere ihe a na-akpọ 'Dinosaur'Ọbịbịa maka njikwa football.
Ọ bụ ya rụrụ ọrụ ebube site n'ime ndị otu Sheffield ya (na-erughi £ 1m) bido ezigbo mmalite oge Premier League nke 2019/2020.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ahụ egwuregwu bọọlụ na-atụle ụdị nke Chris Wilder's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Chris Wilder Childhood - Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
Christopher John Wilder mụrụ na 23 nke ụbọchị Septemba 1967 na Stocksbridge, obere obodo na parish obodo dị na Obodo Sheffield, England.
Ọ bụ ezie na a mụrụ ya na Sheffield, onye na-elekọta football nke agbụrụ White British nwere ezinụlọ ya sitere na Steel City nke Liverpool, nke pụtara na ọ bụ 'Ọkpụkpụ Scouser'.
Wilder tolitere n'akụkụ nne na nna ya, ụmụnne ya na nke kachasị mkpa, ụmụnne nna ya nwere mmetụta dị ukwuu na nzụlite ya.
Ọ si n'ezinụlọ ezinụlọ nke nna ya na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara Liverpool.
Dịka nwatakịrị, ndị nne na nna Wilder nwere mmetụta dị ukwuu na ya na-amasị egwuregwu ahụ. Ndị nne na nna ya mere ka ọ kụzie ya ka esi egwu bọọlụ, kamakwa kpụrụ ya gaa Anfield iji lelee egwuregwu Liverpool. N'okwu ya;
“Anyị na-agabu na Krismas na ezumike ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka mụ na nwanne nna m nwoke bi na otu nnukwu ụlọ, ọwụwa anyanwụ Liverpool na-aga Anfield. M ga-ekiri ha gụnyere papa m na-agba bọọlụ oge ụfọdụ ”
Chris Wilder Mmụta na Ọrụ Buildup:
N’agbata afọ asaa na asaa, Liverpool nwere nnukwu ihe ịga nke ọma, na-emeri ihe niile- European Cup, UEFA Champions League, League Cup, European Super Cup / UEFA Super Cup wdg
Chris Wilder nọ na Anfield ka ya na nna ya na nwanne nna ya see ụfọdụ n'ime oge ndị ahụ, mmepe nke hụrụ na ọ chọghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ịbụ ndị ịgba egwu bọọlụ.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, Wilder nwere mmasị na egwuregwu niile, ọkachasị egwuregwu egwuregwu. N'agbanyeghị na ọ bụ onye na-eme egwuregwu, ndị na-agba ọsọ ka nọgidere na-elekwasị anya.
Iji mee ihe nrọ ya, Chris Wilder hapụrụ Liverpool gaa ebe amụrụ ya na Sheffield ịchọ ohere ịgba bọọlụ.
O nwetara ọrụ dị ka onye na-agba bọọlụ maka Stocksbridge Park Steels FC dị na mpaghara Stocksbridge ruo Sheffield.
Ka oge na-aga, Wilder nwetara ule na-aga nke ọma na Southampton dị ka onye na-ahụ maka ịgba bọl na onye na - agụ akwụkwọ. Dị ka onye ọzụzụ dị ala, ọ rụrụ ọrụ nhicha akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke akụkọ akụkọ Southampton- David Armstrong.
N'agbanyeghị inye ihe kachasị mma, Wilder dara ogbenye enweghị ike ịga n'ihu na ọkwa nwata ahụ na-eto eto. N'ụzọ dị mwute, a tọhapụrụ ya n'ihi arụmọrụ dara ogbenye n'emeghị ya na ndị otu mbụ nke Southampton.
Chris Wilder Football Akụkọ:
Onye ntorobịa ọ bụla toro eto nke birila ndụ ojuju akwukwo ga-amata nke ọma oke ihe mgbu mmụọ na imebi ihe ọ ga - ewetara ya.
Mgbe emezughị ọkwa ahụ dị ka onye egwu ụlọ akwụkwọ Southampton, Wilder dara ogbenye laghachiri Sheffield, obodo ọmụmụ ya. Obi dị anyị ụtọ na Sheffield United nakweere ya dị ka onye na-agbachitere ya.
N'agbanyeghị na ọ bụ onye ọkpụkpọ, Sheffield nyeere Wilder aka ịmalite ọrụ ya. Nwa nwoke bọọlụ gara aga mechara gosi onwe ya na ndị otu egwuregwu klọb na August 1986.
Mgbe ya na Sheffield na-arụ ọrụ, Wilder wedara onwe ya ala site na iji mkpokọta klọb iri na otu gbazinye ego tupu ya abanye Halifax Town na 11, klọb ebe ọ kwụbara akpụkpọ ụkwụ ya Wilder (dị n'okpuru ebe a) lara ezumike nká mgbe ọ dị afọ 1999.
Chris Wilder lara ezumike nká mgbe ọ gbara afọ 34.
Akụkọ gbasara Chris Wilder - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Chris Wilder lara ezumike nká ọ malitere ịbanye na njikwa egwuregwu bọọlụ na nkwenye na ọ ga-eme nke ọma n'agbanyeghị ịbụ onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ.
Ọ malitere ọrụ nkuzi ya na Alfreton Town n'afọ 2001. Nlekọta bọọlụ ka ọ tụrụ anya bidoro na ọkwa dị mma.
Ị maara?… N'ime naanị izu 27 mgbe ọ na-elekọta Alfreton, nwoke Bekee meriri otu ọkpụ anọ.
N'ịwere usoro nke ọzọ na njikwa ọrụ ya, Wilder gara n'ihu ijikwa Halifax maka ihe karịrị egwuregwu 300 ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ banyere mmiri na 30 June 2008.
Mmiri mmiri ahụ mere ka ọ kwaga Oxford na mgbe e mesịrị, Njikọ nke Abụọ Northampton, ebe o duuru ha gaa a Njikọ abụọ aha ya na isi ihe 99.
Ị maara?… A kwaghị Chris Wilder mgbe ọ nọrọ na Northampton ọnwa atọ, mmepe nke dugara na ahụmịhe nwute nke inwe kaadị ya gbadata ọtụtụ ugboro na ebe a na-edebe ahịa. Ogbenye Ya !!!
Chris Wilder nwere ụgwọ kaadị ya jụrụ mgbe ọ kwụrụ ụgwọ ọnwa 3.
Chris Wilder Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Ndụ onye ndụ Chris Wilder n'anya nke oke ifufe ego ka onye Saudi Arabian Prince Abdullah, onye nwe Sheffield, kpọrọ ya ka ọ bụrụ onye nlekọta ụlọ ọrụ ahụ. Na 12 May 2016, Wilder sonyeere klọb nwata nwoke Sheffield United.
N'enye nkwado ego, Wilder mere ọtụtụ ihe ọ nwetara site na mbufe. O jere ozi nke mbụ ka ọ bụrụ; “Ime ka ndị egwuregwu ahụ nwee obi iru ala”.
N’ịchọ ime nke a, onye isi nchịkwa na-enweghị isi gbara akwụkwọ ọjọọ nke “Nabata na Ọrụ”N’ala ọzụzụ ọgbakọ.
Nye ya, enwere okwu mkpali ka mma na ndị egwuregwu ga-enwe obi iru ala.
Chris Wilder mgbe ọ sonyere na Sheffield, kwatuo okwu mkpali na-eme ka ala ọzụzụ ahụ dị.
N'agbanyeghị nmalite oge mbụ na-adịghị mma, Wilder duziri klọb ahụ ịghọ Njikọ Otu Njikọ nke na-echekwa isi ihe 100.ndekọ klọb). Ọganiihu ya gara n'ihu mgbe ọ batara na Championship.
Na Championship, Wilder dugara Sheffield United n'akụkụ ya wee nweta mmeri nke abụọ ya naanị n'ime afọ atọ na klọb ahụ.
N'ịghọta mmezu ya, enwetara ya onye njikwa LMA nke oge 2018 / 2019. Wilder meriri Pep Guardiola rue nzere ahụ ebe onye isi Manchester City rụchara treble ụlọ.
Chris Wilder na-ejide akara LMA Manager nke Afọ- 2018–19.
Mgbe Wilder wetara klọb obodo ya na Premier Premier League, ọ malitere iwu ọgbakọ ya John Lundstram, otu oge Everton jụrụ na onye ọgụgụ isi si n'obodo ya, Liverpool.
Inye ndị ọzọ na-egwu egwu ya nnwere onwe ịrụ ọrụ hụrụ ka onye ọ bụla dabara n'ụzọ zuru oke na Blades 'jigsaw. Wilder nke Sheffield United n'oge edere gosipụtara na ndị egwuregwu bọọlụ na-ezighi ezi mgbe ụfọdụ ndị nkwado kwadoro ya kwa nkpa maka Premier League.
Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, a na-eto onye njikwa Bekee si Liverpool dị ka otu n'ime ndị kachasị ọhụrụ na-eme egwuregwu Premier League mgbe ọ gbasasịrị. Pep Guardiola- niile ekele Blades 'pụtara mmalite na oge 2019/2020. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a
Chris Wilder Nwunye na Childrenmụ:
Chris Wilder bụ nwoke lụrụ nwanyị. Ọ lụrụ na nwunye mbụ ya aha ya bụ Rachel Wilder nke ha nwere ụmụ nwanyị abụọ mara mma ndị bụ; Martha Wilder na Evie Wilder.
Zụlite ụmụaka mgbe di ya gara n'ihu na azụmaahịa ọzụzụ ya, Rachel Wilder jisiri ụlọ ahịa uwe Gap na Manchester na Sheffield.
Dabere na akụkọ, ekpughere na nwunye mbụ Chris Wilder (Rachel) anaghị enwe mmasị n'ịgba bọọlụ, mgbe ụfọdụ ị na-eriju afọ na ya, a na-ele ya anya ruo ọtụtụ awa n'ụlọ ezinụlọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-ele naanị mgbe ndị otu di ya na-emeri.
N'etiti ụmụ nwanyị Chris Wilder, ọ bụ naanị Martha onye egwuregwu nwere mmasị. Evie Wilder bụ onye ejiji.
Mgbe ọtụtụ afọ nke alụmdi na nwunye nne na nna ha gasịrị, ma Martha na Evie malitere ịhụ mmekọrịta na-ebelata n'etiti nne na papa ha.
Ihe bidoro dawa ma o wee jọ njọ nke na a 'ịgba alụkwaghịm' A hụrụ dị ka nhọrọ kachasị mma maka di na nwunye ochie.
Chris Wilder gara n'ihu mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ zutere otu nwanyị a na-akpọ Francesca onye ọ kọwara nzukọ ha dịka 'ịhụnanya anya otu nhụ anya'.
Ma Chris na Francesca lụrụ na ụbọchị mbufe nke 2017 (31st nke Jenụwarị 2017). Kedu ụbọchị onye njikwa football ga-alụ !!
Chris Wilder Ndụ Nke Onwe:
Tingmara ya n'èzí Football ga-enyere gị aka ịchọta nkọwa zuru ezu banyere àgwà ya site na ihe ndị ọ na-eme na bọlbụ football.
Na-amalite, Wilder bụ nwoke na-akwụwa aka ọtọ na-ebubata ụzọ ọkachamara na ụzọ na-enye obi ụtọ iji mee ka ndị mmadụ nọrọ n'okpuru nlekọta ya. O kwenyere na nnwere onwe dị ukwuu ma ọ gaghị ewere ya ma ọ bụrụ na ejighị ya dị mfe.
Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na i mee ihe ga-eme ya obi ụtọ, ọ ga-enwe obi ụtọ ịgwa gị na obi dị ya ụtọ. Ọ bụrụ na i mee ihe na-adịghị enye ya obi ụtọ, ọ ga-agwa gị ozugbo, oge ụfọdụ na-abịakwasị gị dị ka a ton nke brik.
N'ikwu okwu banyere ụdị onye ọ bụ gbasara ịhapụ ịdị umengwụ, o kwuru otu oge na 'Ndị na-echere bụ naanị maka ụlọ oriri na ọ notụ andụ ọ bụghị maka ndị egwuregwu na-aghọtaghị talent ha.
Lovehụnanya Ya maka Beer & Wine: N'ịtụle ndụ onwe ya site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọtụtụ ndị kọwara Chris Wilder dị ka onye na-eso ndị enyi ochie oge ochie na-akpakọrịta (ọkachasị) ebe ọ na-ahụkarị biya ọ hụrụ n'anya.
Mata Chris Wilder Personal Life pụọ na Football.
Ị maara?… Di na nwunye nke ndi ocha ya na mmanya ya na ndi oru ya na ndi egwuregwu ochie na agbadata nke oma mgbe obula ha meriri.
Ndụ Ezinụlọ Chris Wilder:
Ezinụlọ Chris Wilder n'oge edere ede na Ecclesall Road, okporo ụzọ dị na Sheffield, South Yorkshire, England. N'oge a na-ede akwụkwọ, ọ hụla na ndị ezinụlọ niile gbasiri mbọ ike ka ha ghara ịchọ ka ọha mmadụ mara ha.
N'ihi njikọ ezinụlọ, ezinụlọ ya dum na-enwe obi ụtọ mgbe football kpọgara ya na Merseyside ka ọ kpọọ Liverpool ma ọ bụ Everton. Nke a bụ n'ihi na onye isi Sheffield United jiri oge ndị ahụ wee soro ezinụlọ ya nọ na Liverpool.
Ọbụna mgbe ndị otu ya na-egwuri egwu ma ọ bụ Everton ma ọ bụ Liverpool, Wilder hụrụ onwe ya na-azụrụ tiketi egwuregwu maka ụfọdụ ndị iro ya bụ ndị ọ kọwara dị ka Ezinụlọ.
N'ihi ya, igwu egwu megide ezinụlọ ya dị nnọọ njọ n'ihi na nna ya si Liverpool na ọtụtụ ndị ezinụlọ ya ma ọ bụ Liverpool ma ọ bụ ndị Everton.
N'akụkụ nke ọzọ, ndị egwuregwu Sheffield ka na-ekwu na Wilder bụ nke ha nanị n'ihi na ọ toro n'obodo ha.
Ị maara?… A na-ejikarị ụda olu eme Wilder.Ọ bụ otu onye n'ime anyị'na Bramall Lane ọ hụrụ n'anya. Nke a bụ n'ihi na ndị egwuregwu Sheffield hụrụ ya n'anya ma kwenye na ọ bụ ezinụlọ.
Ndụ Chris Wilder:
Chris Wilder na-ebi ndụ okomoko n'agbanyeghị na ọ na-enweta ezigbo ụgwọ ọnwa dịka onye njikwa. Kama iji ụgbọala nwere flasa nke ụgwọ ọrụ ya nwere ike ịzụta, ọ ga - ahọrọ iji ụgbọ njem ọha na eze na-akacha mma na-agafe Sheffield.
Dabere na akụkọ, Wilder na-ejikarị ọdụ ụgbọ ala nke Ecclesall Road n'akụkụ ụlọ ya, akara nke na-egosi ọdịda ala ụwa. O doro anya na ọ bụ ọgwụ mgbochi maka ibi ndụ dị oke ọnụ.
Chris Wilder Eziokwu Na-adịghị Agbanwe:
Ọ bụbu nwata ka Sir Alex Ferguson: Ị maara?… Chris Wilder n'oge mmalite nchịkwa ya bụ nwata akwụkwọ nye akụkọ mgbe ochie onye isi bọọlụ Manchester United Sir Alex Ferguson.
Chris Wilder na Alex Ferguson- Onye nkụzi ya.
N'oge ọ nọ na Alfreton Town na Oxford, Wilder na-agakarị njem na Manchester iji hụ onye njikwa akụkọ maka ndụmọdụ. N'ikwu banyere ahụmịhe ahụ, o kwuru n'otu oge n'okwu ya;
“O wepụtara oge iji nyere m aka n'ụzọ. Ọ na-eme ya na ndị ọrụ nchịkwa ole na ole na Britain, ọ bụghị naanị m. Ihe dị ka nke ahụ nyere m nnukwu nkwado.
Otu mgbe ọ kpọrọ ekwentị n'abalị bọtara ụbọchị m ga-eme egwuregwu ikpeazụ na Oxford [megide York na 2010] wee nyefee ndụmọdụ ole na ole nyeere m aka inweta mmeri.
Religion: Chris Wilder dị ka ọtụtụ ndị ezinụlọ Liverpool kweere na ha sitere n'ezinụlọ Ndị Kraịst. Agbanyeghị, enwere ntakịrị ihe ma ọ bụ enweghị akara na-egosi na ọ rapara n'okpukpe.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Chris Wilder Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.